4 Segondra na Bust | Martech Zone
Alarobia, Novambra 8, 2006 Zoma, Oktobra 24, 2014 Douglas Karr
Tadidinao ny andro nandehananao natory niaraka tamin'ny modemanao nihomehy niaraka tamin'ny fisintomana pejy mba hahitanao azy ireo ny ampitso maraina? Ataoko angamba fa any aoriantsika lavitra ireo andro ireo. John Chow nandefa naoty amin'ity fanadihadiana navoakan'i Jupiter ity izay milaza fa ny ankamaroan'ny mpividy an-tserasera dia handoa vola raha tsy miakatra ao anatin'ny 4 segondra na latsaka ny pejinao.
Miorina amin'ny fanehoan-kevitr'ireo mpiantsena an-tserasera miisa 1,058 izay nanaovana fanadihadiana nandritra ny tapany voalohany tamin'ny 2006, JupiterResearch dia manolotra ity famakafakana manaraka ity:
Ny vokatr'izany amin'ny mpivarotra an-tserasera izay tsy mahomby amin'ny tranokalany dia mihena ny hatsaram-panahy, ny fahatsapana ny marika ratsy, ary ny fatiantoka lehibe indrindra amin'ny varotra ankapobeny.
Ny tsy fivadihan'ny mpivarotra an-tserasera dia miankina amin'ny famoahana pejy haingana, indrindra ho an'ireo mpiantsena mandany vola be sy ireo manana fe-potoana lehibe kokoa.
JupiterResearch dia manolo-kevitra ny mpivarotra mba hanao izay ezaka rehetra hitazomana ny fanaovana pejy tsy mihoatra ny efatra segondra.
Ny valim-pikarohana fanampiny tao amin'ilay tatitra dia mampiseho fa ny ampahatelon'ny mpiantsena manana traikefa mahantra dia nandao tanteraka ny tranokala, raha toa ny 75 isan-jato kosa dia azo inoana fa tsy hiantsena amin'io tranonkala io intsony. Ireo valiny ireo dia mampiseho fa ny tranonkala tsy dia mahomby dia mety manimba ny lazan'ny orinasa iray; araka ny fanadihadiana dia 30 isan-jaton'ny mpanjifa tsy afa-po no hampivelatra ny fiheverana ratsy ny orinasa na hilaza amin'ny namany sy ny fianakaviany ny zavatra niainana.
Mety ho 'fitsipi-pitondrantena' lehibe ho an'ny rindranasa rehetra io. 4 segondra dia mety ho tokonam-baravarana lehibe - ankoatry ny angon-drakitra marobe sy ny fampidirana data marobe, ny pejy iray segondra 4 dia mety te-ho fotoana mavesatra indrindra ho an'ny pejy iray alohan'ny hanapahanao hevitra hanatsara na hanakan-tena amin'ny asany.
Raha mpanjifanao ianao dia mety koa fanantenana iray tianao hapetraka amin'ny mpivarotra anao. Tsy azoko antoka raha azo ampiharina amin'ny sisiny farany ny fitsipika, saingy matoky aho fa ny tsy faharetana dia ny tsy faharetana, na fivarotana an-tserasera izany na fampiharana an-tserasera.
Tags: 4 segondrafaharetan-tsainaCustomer satisfactione-varotraecommercefatiantoka amin'ny varotrampivarotra an-tseraseralazaRetailertsy fivadihan'ny mpivarotra